Tsy manao fitiliana be dia be ny fanjakana no mahatonga an’io hoe tsy betsaka no voa, fa raha manao fitiliana tahaka ny any ivelany izy. Izany dia tsy tokony hatao an’arivony fa an’aliny. Aza ampitahorina ihany koa ny Malagasy fa rehefa voan’io tsy hoe maty. Ny any ivelany 3 isaky ny 1000 ny maty, ny eto ny tena mahafaty olona dia ny tazomoka any Atsimo, hoy izy. Miaina isan’andro aza tsy mahita ny hohaniny isan’andro, mainka fa tapak’andro. Ny Filoha mihitsy no milaza fa efa misy fanefitra io dia ny CVO, ary raha marary mbola misy fitsaboana ihany koa ka maninona no asiana ny fihibohana fa tsy ravana any? CVO aparitaka fa atao milamina tsara satria efa manome antoka izany izy fa manasitrana io, fa tsy ohatran’ny tamin’ny voalohany hoe rehefa avy misotro vao mitantara ny nahazo. Ny fanafody rehefa mivoaka dia tokony ho fantatra mialoha ny fiantraikany fa tsy ny Malagasy no atao “cobaye”, hoy i Jean Jacques Ratsietison. Raha tena manana antoka izy fa sady fanefitra io no manasitrana, dia tsy tokony nisy intsony fihibohana fa tapitra niaraka tamin’ny vava ny fihibohana, fa matoa mbola mihiboka, dia tsy mahatoky ilay CVO izany ianao, hoy ity mpahay toakerana ity.